ụlọ ọcha dị ọcha | China dị ọcha ìhè Manufacturers, Suppliers
aluminum alloy dọkatụrụ adọka-dobe ìhè maka ọgwụ, nri, ịdị ọcha, electric, ụlọ dị ọcha
A na-eji ụdị anya mmiri emebe ndò ìhè. A na-ejikọ oriọna ahụ na ndu ma ọ bụ tinye ya iche, na akara njikọ ngwa ngwa n'ime. A na-eji oriọna na ntuziaka mee ya akụkụ ọla wee kpochie ya na kposara igwe anaghị agba nchara iji hụ na ahụ oriọna ahụ na ụzọ mgbapụ anaghị ada. O metụtara ọgwụ, ahụ ike, nri, elektrọniks na ụkpụrụ ndị ọzọ dị ọcha nke ịdị ọcha.
klas 1 azụ mbuli ma ọ bụ ala oghe ụdị dị ọcha
Ọkụ ahụ dabara keel ahụ nke ọma, ọ dịkwa mfe ịwụnye. Ahụ ọkụ na mkpuchi azụ jupụtara na akara njupụta dị elu. Enweghị uzuzu, dị mfe ihicha, enweghị ntanye ọkụ, mkpuchi azụ na-anabata ụdị ụzọ mepere emepe, nke ejiri akwa dị elu, dị mfe imeghe ma mechie, dị mfe iji debe, njehie zuru oke erughị +/- 1mm, flatness kwekọrọ na JS141.
A na-eji ọkụ emebe anụ ahụ ka ọ dị mfe nhicha na ọdịdị dị mfe. Ejiri ya na ngosiputa enyo. Ejiri eriri ọkụ jikọtara ya na anụ ahụ nwere njem njegharị dị elu. Adabara ọkụ nke electronic ogbako, ọgwụ omumuihe na elu ọkọlọtọ dị ọcha omumuihe.
klas 1 recessed ụdị ọcha dị ọcha
ìhè dị ọcha maka ụlọ ọrụ ịwa ahụ ICU
Ìhè ahụ imewe kaadị edo edo, mmesapụ aka anya, wuru na-mirror ngosiputa, luminaire etiti imewe 45 ogo mkpọda, mara mma, mfe ọcha; Njikọ dị n'etiti ndobe oriọna na oriọna na-eji akara akara dị elu dị elu; Enwere ike ịhazi ogo oriọna ahụ. Ofu ọcha oriọna, kwesịrị ekwesị maka ọgwụ na-arụ ọrụ ụlọ, ICU Ward, wdg
igwe anaghị agba nchara oyi akpọrepu panel klas 1 ọcha ìhè
Achọghị ka ọkụ ọkụ ghara ịgbanwe ka ọ bụrụ ìhè a na-ahụ anya, ogologo ntụgharị nke 253.7 nm nwere ike ịnwe mmetụta nsị dị mma nke ọma, nke a bụ n'ihi na mkpụrụ ndụ nke ọkụ ọkụ ọkụ enwere iwu, na 250-270 nm ultraviolet ray nwere nke kachasị absorption, etinye obi na ultraviolet ray n'eziokwu ọrụ na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ma ọ bụ DNA, ọ na-arụ allochromatic, ike photon ultraviolet na-etinye uche site na ụzọ abụọ nke DNA, na-akpata mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ ihe nketa, na-eme ka nje bacteria nwụọ n'otu ntabi ma ọ bụ enweghị ike mụta nwa, mezuo nzube nke nwoke ịga ụlọ ọgwụ.